Xoog hayihii hore ee Q.M Mr Kofi Annan ayaa maanta ka dhoofay Dalka Kenya | maakhir.com
Xoog hayihii hore ee Q.M Mr Kofi Annan ayaa maanta ka dhoofay Dalka Kenya
Nairobi:- Xoog hayihii hore ee Q.M Mr Kofi Annan ayaa maanta ka duulay Caasimada Dalka Kenya ee Nairobi halkaasi oo mudo ku sugnaan ka dib wada hadaldii uu ka dhex waday Garab yada ku loolamaya siyaasada Dalkaasi Kenya, Kofi Annan intii aanu ka duulin Garoonka Magaalada Nairobi waxa uu Saxaafada u sheegay inay ku guulaysteen isaga ragii kale ee dadaalkaasi kula jiray in Nabad laga dhaliyo Dalka Kenya.
Mudo 41 Maalmood ah Kadib oo uu Koffi Annan uu ku sugnaa Dalka Kenya Isagoo waday Wadahadaladii Nabada ee Lagu heshiisiinayey siyaasiinta dalka Kenya ayuu Maanta uduulay Magaalada Kampala ee Casimada Dalka Yugaandha, halkaasi uu wada hadal kula yeelan doono Masuuliyiinta Dalkaasi walaw aan la sheecin waxay ka wada hadlayaan.
Mr Annan ayaa Daboolka ka qaaday in dadka reer Kenya looga baahan yahay inay ilaaliyaan Nabada iyo Xasiloonida Dalkooda isaga oo Farta ku fiiqay inay garawsanaadaan dhibkii soo Maray horaantii sandkii aan soo dhaafnay taasi oo ka dhalay is maan dhaafkii ka dhex aloosmay Siyaasiyiinta Dalkaasi.
Mr Koofi Annan waxa kaloo uu sheegay inay xaliyeen dhamaanba khilaafkii ka taagnaa gudaha Dal kaasi oo aanu walaalaynay Labaada siyaasi ee ku legdamayay doorashadii Dalkaasi ka dhacay.
Kofi Annan ayaa mudo dheer ku sugnaa gudaha Dalka kenya isaga iyo Koox kale oo Afrikaan ah ujeekooduna waxa uu ahaa ujeedkoodu ahaa inay xaliyaan khilaafkii ka dhashay Doorashooyinkii Dalkaasi dhacay.
« Shirka ka socda Haatan Xarunta Madaxtooyada ee Villa Somaliya
Golaha wasiirada Puntland oo maanta ansixiyay xeerka soo saarida Macdanta Puntland »